Tedial - မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာစနစ်များ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » Tedial - မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာစနစ်များ
Tedial - မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာစနစ်များ
တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးကုမ္ပဏီကြောင့်သူ့ရဲ့ High-caliber ဖန်တီးမှုကမှရေးဆွဲအနည်းငယ်ပိုအာရုံစိုက်မှုရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့အံ့မခန်းနှင့်ပြောင်းလဲနေသောထုတ်ကုန်လိုင်းနှင့်အတူရှိနေသည်။ Tedial သူတို့အားကုမ္ပဏီတွေရဲ့တဦးတည်းပါ! ဒီစဉ်းစားကြည့်ပါ:
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းနည်းပညာတစ်ဦးကသိသိသာသာပြောင်းလဲမှုတခုအိုင်တီ-ဗဟိုပြုအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်တသားတကြှနျတျောတို့၏ဟာ့ဒ်ဝဲ-based မီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်းအသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ သငျသညျအများဆုံးထုတ်လွှင့်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏လျှင်, သင်သစ်ကိုကို formats နှင့်သိုလှောင်မှုအတွက်ရွေးချယ်စရာများကိုထောကျပံ့များနှင့်လည်းအသုံးပြုသူအသစ်-တောင်းဆိုချက်များနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ဤရာစုအစမှာတစ်ဦးမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (ပေးခဲ့သည်), သို့မဟုတ်စာကြည့်တိုက် tool ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ ယင်းအသံလွှင့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အဖြစ် ပို. ပို. ခေတ်မီဆန်းပြားသောအကြောင်းအရာများကိုသိမ်းဆည်းခြင်း, စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဖြန့်ဝေစနစ်များထွန်းနှင့်အတူရှိနိုင်ပါဖြစ်လာကြပါပြီသောသိသိသာသာထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအခွင့်အလမ်းများကိုထောကျပံ့ဖို့အမွေပေးခဲ့သည်စနစ်များ strain တစတစတိုးတက်ပြောင်းလဲလာ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MAMs မှ Xytech ထုတ်ကုန်များကဲ့သို့အလုပ်အမိန့်စနစ်များကိုဖြည့်ထည့်သည်၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်ပေါင်းစည်းမှုတိုးချဲ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enabled, ဒါပေမယ့်ယနေ့ပင်ရိုးရှင်းသောစာကြည့်တိုက် ရောင်းချသူ access ကို, တိုးချဲ့ archive ကိုကိရိယာများ, တည်းဖြတ်စနစ်များ, စနစ်အပေါ်မျိုးစုံပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပဥယျာဉ်စောင့်, လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်များ, စီမံခန့်ခွဲမှု dashboards, အရေးပေါ်ကိစ္စတင်းမာမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အလိုအလျောက် Workflows နှင့်အတူပေါင်းစပ်အပြင်ဘက်: အပါအဝင်ရှုပ်ထွေးလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်အတူအကြီးအကျယ်ဘက်ပေါင်းစုံစနစ်များ, သို့စိုက်ပျိုးကြသည်။ ဖောက်သည်ကိုပင်တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦး ad hoc အခြေခံပေါ်မှာ, ဝေးလံသောနေရာများမှာကို virtual MAMs အဘို့တောင်းလျှောက်ကြပြီ။ ထိုသို့နောက်ကွယ်မှအားလုံးအခြေခံအဆောက်အအုံ "မိုဃ်းတိမ်၌" တစ်ဦးအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်၏ဂတိပုန်းကွယ်။
မေးခွန်းအသနားခံ: သင်၏ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သင့်ကုမ္ပဏီရဲ့အစဉ်အဆက်ကိုတိုးမြှင့်တောင်းဆိုချက်တွေလက်ခံပေးနိုင်ရန်နေချိန်မှာသင်မည်သို့မိုဃ်းတိမ်ကိုသိုလှောင်မှုနဲ့ Workflows ၏အကျိုးကျေးဇူးများတိုးမြှင့်ဖို့သင့်မီဒီယာစက်ရုံတည်နေရာအားလဲ?
အဘယ်သူမျှမသင့်အဖွဲ့အစည်း၏အရွယ်အစားအရေးကိုအနည်းငယ်စနစ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတစ်ဦး "forklift အဆင့်မြှင့်" မတတ်နိုင်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ပေးခဲ့သည်ဗိသုကာပူးတွဲတင်ပြထားဖို့အဓိကသော့ချက်တိုးတက်မှုနှုန်းကိုထောက်ပံ့သောကမ္ဘာကြီးကိုဦးဆောင်မီဒီယာအိုင်တီ tools များချမှတ်နှင့်သင့်စစ်ဆင်ရေးကြီးထွားအဖြစ်သင်သည်သင်၏လက်ရှိ system ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုပါရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကင် Tedial'' s ကိုဒီဇိုင်းအတွေးအခေါ်နှင့်ကုမ္ပဏီရဲ့ကျယ်ပြန့်အောင်မြင်မှု၏အခြေခံအုတ်မြစ်.
Tedial အဘယ်သူမျှမဘယ်လောက်ပဲရှုပ်ထွေးသင့်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုစိန်ခေါ်မှုများကိုသင်အဘို့သင့်ပေးခဲ့သည်အလုပ်အောင်အာရုံစိုက်။ မီဒီယာအိုင်တီ tool များ၏ကုမ္ပဏီရဲ့ suite ကို Multi-site ကို, Multi-အိမ်ငှားလုပ်ငန်းပေးခဲ့သည်စနစ်များနှင့်အဆုံးမှအဆုံးသို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်စဉ်ကို Workflows ထောက်ခံပါတယ်။ အတှေ့အကွုံ 13 နှစ်ပေါင်းကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကွန်ယက်ကိုစိန်ခေါ်မှုများဖြေရှင်းနှင့်အတူ, Tedial integrat ထုတ်လွှင့်သည့်ကုမ္ပဏီများကူညီပေးခဲ့တယ် အီး၎င်းတို့၏စစ်ဆင်ရေးယုံကြည်စိတ်ချရသောစီမံခန့်ခွဲမှုကြီးကြပ်နှင့်အတူစစ်မှန်သော end-to-end စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်စဉ်များသို့ workflows ။
, အရေးအပါဆုံး Tedial သူတို့ဖောက်သည် '' ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအပြည့်အဝမယ့်လုပ်ငန်းအသွားအလာသို့မဟုတ် Third-party tool ကိုမနက်ဖြန်လာမည့်ရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်နောက်နှစ်ကိုပြောင်းလဲစေမည်အကြောင်းအသိအမှတ်ပြုများနှင့်တစ်ဦးလွယ်ကူသောလိုက်လျောညီထွေအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်လုပ်ငန်းအသွားအလာဒီဇိုင်းများနှင့် tools များဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ သငျသညျသစ် Workflows add ပေါင်းစပ်သို့မဟုတ်အစားထိုးရန်ထုတ်ကုန်သင့်ရဲ့စနစ်တွေအတွက်, သို့မဟုတ်သင့်ဒေတာဘေ့စမော်ဒယ်တိုင်းညှိနှိုင်းမှုများအတွက်စက်ရုံမှအကုန်အကျပြန်မပါဘဲတိုးချဲ့နိုင်အောင်သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူနှင့်ကျွမ်းကျင်အဖွဲ့အထောက်အပံ့နှင့်လေ့ကျင့်ရေး၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိနှင့်အတူသင်နှင့်သင့်ဝန်ထမ်းများပေးပါသည်။ အဆိုပါ Tedial အသုံးပြုသူ interfaces browser ကို-based (Chrome, Firefox, Safari နဲ့ Internet Explorer နှင့်သဟဇာတ) ဖြစ်ကြပြီးတောင်အစွမ်းထက်လုံခြုံရေး features အတူအလွန်အမင်းအော်ပရေတာ-friendly ဖြစ်တယ်။ Tedial'' s ကို tools တွေကိုသင့်ရဲ့အောက်ဆုံးလိုင်းဆော့ဖျဝဲအင်ဂျင်နီယာများ၏လိုအပ်မှုမရှိဘဲအစဉ်အမြဲ-တိုးချဲ့ OTT နှင့် VOD လိုအပ်ချက်များကိုဖြေရှင်းရန်အလိုအလျောက် Workflows ထောင်ပေါင်းများစွာ၏တည်ဆောက်ထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်ဖို့ထုတ်လွှင့်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ enabled, ဤတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။
ပေးခဲ့သည်ရဲ့နှစ်ပေါင်းန်းကျင်ဖြစ်, ဒါကြောင့်အဘယျသို့ကြောင့်ပါပြီ Tedial ကွဲပြားခြားနားသော?
Tedial သူတို့ရရှိနိုင်ဖြစ်လာအဖြစ်အသစ်နှင့်အနာဂတ်နည်းပညာများမှပေါင်းစည်းမှုကိုသေချာစေရန် architected ဒီဇိုင်းများနှင့်အတူပွင့်လင်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အကုန်စည်အခြေစိုက်အိုင်တီအခြေခံအဆောက်အအုံအပေါ်အလေးပေး;
Tedial Multi-site ကိုပေးခဲ့သည်စာကြည့်တိုက်စစ်ဆင်ရေး၏ရှေ့ဆောင်နှင့်လက်ရှိကမ္ဘာကခေါင်းဆောင်လျက်ရှိ၏
Tedial အထူးသဖြင့် (ပေးခဲ့သည်မောင်းနှင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း-ဗဟိုပြုလုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်များအတွက်အသိအမှတ်ပြုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါသည် အလိုအလျောက် လုပ်ငန်းအသွားအလာစနစ်များ); နှင့်
Tedial အမွေပေးခဲ့သည်များနှင့်မော်ကွန်းတိုက်စနစ်များ၏ပြသမှု, Re-အသုံးပြုမှု, ရွှေ့ပြောင်းနှင့်အစားထိုးအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုသက်သေပြခဲ့သည်။
Tedial ထုတ်ကုန်စစ်မှန်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်စဉ်ကိုစနစ်များများကိုချောမွေ့စွာအတူတကွအလုပ်လုပ်ဖို့ဒီဇိုင်းလွတ်လပ်သော module တွေဖြစ်ကြသည်။ တတိယပါတီ applications များနှင့်စနစ်များနှင့်အတူပေါင်းစပ်ဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုခွင့်ပြု Tedial ပုံမှန်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောစက်ရုံအပေါငျးတို့သစနစ်များနှင့်နည်းပညာများ spanning Workflows အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်။ အဆိုပါ TARSYS ပေးခဲ့သည်စနစ်က၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်လိုင်း၏အဓိကဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, သူတို့မှာလည်းသူတို့ရဲ့လက်ရှိနည်းပညာများ employ ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောလျှောက်လွှာနှင့်အတူဖောက်သည်များကိုအခြားစျေးသည် '' ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူပေါင်းစည်းကြောင်းအထောက်အပံ့ကိုပေးပြီးစနစ်များကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်။
Tedial'' s ကိုထုတ်ကုန်များ၏ suite ကိုတစ်ဦးချင်းစီကို client ရဲ့ထူးခြားတဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ configured နိုင်ပါသည်။ အောက်ပါထုတ်ကုန်ထုံးစံဖြေရှင်းချက်များကိုပေါင်းစပ်နိုင်သူတွေကိုအချို့ကိုဥပမာနေသောခေါင်းစဉ်:
Tarsys - Tedial'' s ကိုမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (ပေးခဲ့သည်) စနစ်ဘောင်တိကျစွာတူကလစ်ဖို့ဆက်စပ်မြင့်အနိမ့် resolution ကိုမီဒီယာအကြောင်းအရာမျိုးစုံကို formats စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ရှာဖွေရေးစွမ်းရည်, မီဒီယာကိုင်တွယ်နှင့် metadata စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်လုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိပါတယ်။ အရာဝတ္ထု-based စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာကို အသုံးပြု. Tarsys ပြုလုပ်ရန်သင်၏အဖွဲ့အစည်းများ၏အထူးဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်ဒေသများဘို့ဆက်ကပ်အပ်နှံဒေတာဘေ့စမော်ဒယ်များ၏ဖန်တီးမှုများအတွက် Multi-site ကိုနှင့် Multi-repository ကိုစစ်ဆင်ရေးထောက်ခံပါတယ်။
Tedial client - တစ် web-based Client ကိုအနိမ့် resolution ကိုသုံးပြီးဘောင်တိကျဖြတ်တည်းဖြတ်ရေး featuring အနိမ့် resolution ကိုအတွက်စမတ် browsing အတွက်အပါအဝင်နှင့် EDLs ဝေမျှဖို့အသုံးပြုသူများအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအလုပျအတှကျဗဟိုထားတဲ့ workspace တွေကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, se မုတ်, Mam အကြောင်းအရာ, etc
AST - Tedial'' s ကို hierarchical သိုလှောင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (HSM) ၏အယူအဆပြန်ဆို '' အလိုအလြောကျအသုံးပြုသူတစ်ဦး-ပုံစံလုပ်ရန်အညီ disk ကိုသိုလှောင်မှုအတွက်ပေးခဲ့သည်, ယာဉ်အသွားအလာနှင့် Automation စနစ်များအားဖြင့်လိုအပ်သမျှသောမီဒီယာစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့် '' ပေါရာဏအွန်လိုင်းနှင့်နက်ရှိုင်းသော archive ကိုအနီး 'ရှေ့ဆက်ရှာဖွေပါ။ " တူသောအများအပြားဦးဆောင်သိုလှောင်မှုစနစ်များကိုမှ interfaces supporting သဟဇာတ, တပ်ဦးဆင်ဝင်နဲ့ Amazon Glacier, AST ချောမွေ့စွာသို့ပေါင်းစည်းခံရသဖြင့် Multi-format နဲ့မီဒီယာဖိုင်တွေကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း restore အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော Tedial'' s ကိုအစွမ်းထက် MPM စနစ်။
MPM - Tedial'' s ကိုအစွမ်းထက် application ကို dual-အခန်းကဏ္ဍပေးပါသည်: မီဒီယာ workflowautomation နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း-Level ပေါင်းစည်းမှုပလက်ဖောင်း။ ထိုကဲ့သို့သောစတာတွေကဗီဒီယိုဆာဗာများ, အသွားအလာ, play-ထွက်အလိုအလျောက်, စာတန်းထိုး devices များ, အလိုအလျှောက် QC, အဖြစ်ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်စက်ရုံအပေါငျးတို့သ Third-party စနစ်များနှင့်နည်းပညာများပေါင်းစပ်တစ်ဦးကစစ်မှန်တဲ့အလယ်တန်းအလွှာ MPM လွတ်လပ်စွာမီဒီယာနှင့် metadata ကိုစီးဆင်းမှုကြောင့်သေချာ။ ထိုအကြောင်းကြောင့် MPM နှင့်အတူ Tarsys ပေးခဲ့သည်၏တင်းကျပ်စွာပေါင်းစည်းမှု၏, မီဒီယာ, ရှာကို select လုပ်ပါနှင့်သင့်စက်ရုံထဲမှာတစ်နေရာရာတခြားလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါသေးမီဒီယာ၏ဗားရှင်း employ တစ်အသုံးပြုသူများအတွက်နီးပါးမဖြစ်နိုင်က rendering "သတိထားလုပ်ငန်းအသွားအလာ" ဖြစ်လာသည်။
ဖွံ့ဖြိုးပြီးစနစ်များလည်းပေါင်းစည်းနိုင်ပါတယ် In-အိမ်သူအိမ်သားအဖြစ် MPM, စီးပွားဖြစ်ထုတ်ကုန်ကန့်သတ်ထားစဉ်ဆက်မပြတ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်မအတွက်ဘက်ပေါင်းစုံစနစ်များ၏ကြီးမားသောအစုစုရှိပါတယ်။
Ficus -Tedial'' s ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (BPM) tool တစ်ခုခြင်း, ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အများဆုံးသက်သေခြင်းနှင့်ရင့်ကျက်။ Ficus စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအုပ်ချုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိတန်ဖိုးရှိရှိဖြစ်စဉ်များ systemizing နေဖြင့်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုပါဝင်သော Workflows ၏အဓိပ္ပါယ်, ခြေရာခံခြင်းနှင့်သေဒဏ်စီရင်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာအော်ပရေတာများအတွက်အလုပ်အမိန့်ကိုထုတ်လုပ်လျက်, Tarsys ပေးခဲ့သည်များနှင့် MPM နှင့်အတူတင်းကျပ်စွာပေါင်းစည်းမှုကိုကျေးဇူးတင်, Ficus အလိုအလြောကျမီဒီယာနှင့်ဆက်စပ် metadata ကိုရသောအခါအဘယ်မှာလိုအပ်ရရှိနိုင်ပါသည်ပေါင်းရရှိနိုင်အရင်းအမြစ်များကိုအများဆုံးအကောင်းဆုံးလမ်းအတွက်အသုံးပြုကြသည်ကြောင်းသေချာစေရန်တတ်နိုင်သည်။ Ficus Workflows အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါသေချာနှင့်စံချိန်စံညွှန်း process လုပ်တယ်ကြောင်းစံ BPM notation 2.0 အသုံးပြု. သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
Tedial မြောက်အမေရိက 80 ပြည့်ဝန်ထမ်းများအပါအဝင်5လူမျိုးကိုစိုးန်ထမ်းများနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မား, ယုံကြည်စိတ်ချရသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အစိုင်အခဲ 24X7X365 ထောက်ခံမှုများအတွက်ဂုဏ်သတင်းရရှိထားပြီးပါပြီ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏စနစ်များကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင်ကမ္ဘာတဝှမ်းထုတ်လွှင့်သည့်ကုမ္ပဏီများမှာတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအုပ်စုများအစိုးရများ, ဆေးရုံများနှင့်အင်တာနက်မီဒီယာကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်း Ericsson က ထုတ်လွှင့်န်ဆောင်မှုများနှင့် Televisa ။
AST အသံလွှင်း အကြောင်းအရာ hierarchical သိုလှောင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (HSM) ပေးခဲ့သည် မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု MPM OTT သိုလှောင်ခြင်း Tarsys Tedial vod Xytech 2014-10-30
ယခင်: ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Lab ကနယူးယောက်မြို့ကိုပိတ်ပြီးမှ
နောက်တစ်ခု: RCS '' Bullet အမေရိကန်နှစ်လယ်ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ် Debate အသံလွှင့်အဘို့အချိန်နှင့်တပြေးညီတွစ်တာပေါင်းစည်းရေးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်